I-Pu-Skirt, ibhedi yokulala, iimpahla zangaphandle, isikhuseli sesikhumba
I-Hebei Besttone Fashion Co., Ltd.
I-Hebei Besttone Fashion Co, Ltd. eyasekwa ngo-2005, yinkampani yorhwebo enobuchule kunye nobanzi ehlanganisa uphando kunye nophuhliso lobuchwephesha, isambatho se-PU, isambatho sempahla, isambatho kunye nempahla yangaphandle. Inkampani inoyilo olugqwesileyo kunye neqela lokuvelisa ukuqinisekisa ukudityaniswa okusondeleyo kuphando ukuya kwimveliso.
Ijacket yebhayisikile ethambileyo
Nceda ushiye kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24
Ukudala ukuveliswa kwangaphandle ...
Ngomhla we-Meyi ka-2020, i-Besttone co., Ltd iseke isebe elitsha- isebe leemveliso zokhuselo lwangaphandle. Ukuqala uphando kunye nokuphuhlisa iimveliso zokhuselo lwangaphandle. Iminyaka engama-20 edlulileyo, i ...
Xhasa kwi-World Epi ...
Ukuchaphazeleka yimeko yehlabathi yesifo esitsha secoronavirus, umzi-mveliso uqala kwimaski yophando kunye nemiyalelo yemaski yemveliso ngokungxamisekileyo, ukwenza eyethu imizamo kuthintelo lobhubhane wehlabathi. Hayi ...